Umbango uduvise isidumbu emakhazeni - Ilanga News
Home Izindaba Umbango uduvise isidumbu emakhazeni
Umndeni usola umngani ngokushona kwendodakazi yawo
UNKK Thandekile Langa nodadewabo, uNkz Benzeleni (uMaLanga) uMthethwa, becela ukutholelwa usizo ukuze kuxazululeke inkinga ebakhungethe.
SESIBHADLE emakhazeni inyanga yonke isidumbu sephoyisa lesifazane laseMlazi ngenxa yomba-ngo wokusingcwaba no-kwenziwa kolibofuzo phakathi komndeni walo nowesifazane okuthiwa ushade nalo ngoNtulikazi (July) nonyaka.
Umndeni kaNkk Philisiwe Mthethwa, uMaLanga – okuvela ukuthi umyeni wakhe, uMnu Njabulo Mthethwa washona ngo-2017 bengenangane – uthi ubungazi ukuthi indodakazi yawo ibishade noNkz Silindile Hlophe obengu-mngani wayo, ngisho kusekhona umyeni wayo naye obeyiphoyisa.
Umndeni wakwaLanga uthi wathola ngesikhathi indodakazi yawo isegunjini labagula kakhulu esibhedlela iSt Augustine’s, eThe-kwini – ngesikhathi uthi uyoyibona ukuthi kunowesifazane onguNkz (Silindile) Hlophe owakhipha umyalelo wokuthi ungavunyelwa ukumbona, kuvunyelwe yena kuphela ngoba ungumyeni wakhe.
Elandisa ILANGA uNkz Thande-kile Langa, ongudadewabo kamufi, uthi uNkz Hlophe bebemazi nje-ngomngani omkhulu kadadewabo kusukela kudala kusekhona uMnu Mthethwa.
Uthi kwakungekho angaluxoxi naye ngisho kunomcimbi wayefika naye ayomlekelela njengoba babe-sebenza ndawonye emaphoyiseni.
“Kayikho indlu abengayingeni lapha ekhaya njengomngani kadadewethu, ngisho isoka likadadewethu alithola emuva kokushona komyeni wakhe, belimazi njengomngani.
“Bekuthi uma udadewethu ezovakashela isoka lakhe, acele izi-ngane zalo mngani wakhe ukuba zizolalisa umama ngoba bebehlala bobabili. Ubengakaze asitshele ukuthi ushadile nalo mngani wakhe. Isitifiketi somshado wabo sithi bashade ngoNtulikazi (July) nonyaka.
“Ushona nje udadewethu ubesanda, ukuthenga iBMW okumanje lona wesifazane uyithathile, ihleli kuyena. Ngosuku udadewethu ashona ngalo, lona wesifazane wayelaliswe khona esibhe-dlela eSt Augustine’s, kodwa wacela ukudedelwa izinsukwana wangaya kubo, wazolala lapha ekhaya ekameleni likadadewethu nezingane zakhe.
“Waqoqa zonke izinto zikamufi ngisho namapasi, amakhadi ase-bhange nomakhalekhukhwini wakhe, wabuyela nakho esibhedlela,” kusho uNkz Langa.
Uthi uma bemfonela becela abanike zonke izinto zikamufi, uyenqaba. Utshele ILANGA ukuthi ngesikhathi udadewabo engakaguli, wabatshela ukuthi uthenga isango elizofakwa uma eseqedile ukulikhokhela u-R9 000 owawusele.
“Kwathi sekuphela isonto eshonile, kwafika abantu abathi bazofaka isango befonelwe ngudadewethu, imali bazoyithola. Kwathi uma sibheka inombolo abathi yiyo ebafonele, sabona ukuthi ngekadadewethu ngempela.
“Kwathi sisamangazwe yilokho, silwa nalaba bantu besango, kwafi-ka udadewabo kaNkz Hlophe, ethi uzobanika imali yesango. Imali kasbari (uMnu Mthethwa) eyaphuma emuva kokuba eshonile, ikuwo la makhadi kadadewethu atha-thwe nguNkz Hlophe,” kusho uNkz Langa.
Uthi udokotela owayelapha udadewabo esibhedlela, waba-tshela ukuthi isibindi nezinso zakhe kwakulimele kuphelile, uyasola ukuthi wadla ushevu, uzomyisa emakhazeni kahulumeni ePhoenix, ukuze kuhlolwe isidu-mbu. Udaba waludlulisela emaphoyiseni.
“Inkinga esibhekene nayo, iphoyisa okuthiwa lizosibiza njengemindeni ethintekayo, lisazise ngemiphumela yokuhlo-lwa kwesidumbu eselixhumene kakhulu noNkz Hlophe – lisitshela ukuthi odokotela kabasheshanga ukusihlola isidumbu futhi ngeke sisahloleka manje ngoba sesihlale kakhulu emakhazeni, masivele sisithathe, sisingcwabe.
“Okuxakayo wukuthi abasemakhazeni basitshela ukuthi isidumbu sahlolwa. Okusenza sisole ukuthi kukhona okufihlwayo, wukuthi uNkz Hlophe useke wazama ukuthi isidumbu sikhishwe asingcwabe yena, abasemakhazeni benqaba ngoba sesenze incwadi yokuthi singakhishwa umndeni ungekho,” kusho yena.
Uthe bacela iziphathimandla zibasize, kuphume imiphumela yokuhlolwa kwesidumbu, baleke-lelwe, bakwazi ukuthola omazisi bakamufi namakhadi akhe asebha-nge kubuye nemoto.
“Umndeni wethu ukube bewumi kahle, ngabe sesicela ngisho aba-meli manje, kasinamali njengoba umama uhola impesheni nathi
“Udadewethu nguye ebesithe-mbele kuyena, kanti uzosidayisa ashade imishado esingayazi nje-ngoba lo mngani waze wamqopha (i-video) bebhalisa umshado kwandabazabantu,” kusho yena.
Ethintwa uNkz Hlophe, ukuqi-nisekisile ukuthi ushadile nomufi futhi yonke into kamufi ibiza yena. Encwadini yefa, wabhala yena njengomuntu ozothatha konke “nami bengimbhalile kokwami”.
“Umndeni wakhe bese ngivumi-le ukuthi mawumngcwabe, kodwa ngiyabona ukuthi isithandwa sami silinde mina ukuthi ngiphume esi-bhedlela bese sifihlwa sengikhona.
“Kungiphatha kabi ukuthi kuno-wesilisa abalokhu bethi ubetha-ndana naso ekubeni besishadile, kodwa ngoba ngeke sisavuka ngisi-buze ngaye, sengisixolele futhi uthando lwami kalushintshile ngaso,” kusho yena.
Uthi bavumelana nomufi ukuthi noma ngabe kuhamba bani emhlabeni, kodwa ngeke bamlahle unina, bazoqhubeka bahlale naye uma ethanda.
Mayelana nemali eyaphuma emuva kokushona kukaMnu Mthethwa, uthe bayisebenzisa behamba begibela amabhanoyi bevakasha nezingane, enye balungisa ngayo umuzi.
“Lo mndeni mawungilinde ngiphume la (esibhedlela) ngizowu-khombisa ukuthi kanginsangu, kangibhenywa.
“Ngiyawuzwa uthi usola ukuthi isithandwa sami sibulawe yimina, ngangingasidlisa kanjani uphoyizeni ngoba ngesikhathi esagula ngaso, mina kwase kunesikhathi ngihleli la esibhedlela?” kubuza uNkz Hlophe.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe imiphumela yolibofuzo kayikaphumi, wathi umndeni wakwaLanga unalo ilungelo loku-yofuna incwadi enkantolo ezovi-mba ukuba kungaqhubeki ukungcwatshwa kwesidumbu
sendodakazi yawo imiphumela ingakaphumi.
Previous articleUmphakathi udinwe wavala isonto elisemhlabeni wenkosi
Next articleUkhuthaza ukufukulana esizweni esimnyama